TOERANA TSARA INDRINDRA MBA HIHAONA AFAKA RY ZALAHY
Raha ianao no tokana nandritra ny fotoana kelikely fotsiny mety toa tsy hihaona tsara, tokana ry zalahy izay eo amin’ny ambaratonga, dia mety ho nieritreritra misy zavatra tsy mety aminao. Fa ny tena zava-misy dia mety fotsiny ho mijery amin’ny toerana rehetra ny tsy mety. Taona vitsy lasa izay, nampiasa ny mihevitra fa tsy nisy afa-tsy toerana iray mba hihaona amin’ny lehilahy ny fisotroana. Azoko sary an-tsaina ny tenako nipetraka forlornly amin’ny latabatra miaraka amin’ny vera misy divay, mitady tsara leo, midina eo amin’ny alehany rehetra sy mila angady-aho-saingy koa mazava saro-pantarina ampy ho an’ny lehilahy mba hahita ahy mahaliana. Araka izany, nihevitra aho fa ry zalahy no miaraka amin ny ahy, dia tiako ny manomboka mifampiresaka, ampifamadiho ny isa sy ny velona mandrakizay izy rehefa sambatra. Indrisy anefa, fa karazana tranga nisy afa-tsy ao an-dohako. Ry zalahy tsy foana miaraka amin ny tany am-ponja izy ireo tafintohina, ary indraindray lavo. Na dia ny olona no hihaona ao amin’ny trano fisotroana, izany fotsiny ka namely sy ny malahelo. Afaka mivoaka nandritra ny valo sabotsy teo aza kivy sy ny hihaona tsy misy olona, na ianao afaka ny hahazo tsara vintana ny fotoana voalohany manodidina. Satria ny toy izany loteria, ny tsy manana mba ho mora kokoa, azo ampiharina bebe kokoa ny fomba hitsena afaka ry zalahy a, marina ny vehivavy. Eny, efa tonga ny fotoana ho anao ny farany, mangataka ny namana raha toa ka fantatr’izy ireo na iza na iza te ho liana amin’ny, ary izay te ho tia anao indray. Na angamba ianao efa nandany fotoana be dia be batting hatrany ny patronizing namana izay te-hampahafantatra anareo ny Glenn avy HR satria mahatsiaro tena ka miala tsiny ho anareo, izao no fotoana ho anao ny manontany ‘ahy ny zavatra efa natao. Fa satria ianao indrindra mametraka ny fiainana eo an-tanan olon-kafa, zava-dehibe ny manontany ny namana tsara. Mangataha olona iray izay mahafantatra anareo ao anatiny, ary izay no tena fahaiza. Ankoatra izany, jereo ny olon-tiany. Raha toa ka hahita ny olon-tiany mahafinaritra sy manintona, dia midika izany dia efa nahazo mitovy tsiro amin’ny olona ianao. Raha toa ka efa nahazo ny alika, mandeha izany eo an-toerana ny valan-javaboahary no fomba lehibe mba hihaona ry zalahy izay dia avy ny alika. Na dia rehefa Twitter dia mankalaza ny fahafolo nahaterahany sy ny renibeny manana Facebook kaonty vahoaka no mbola miahiahy ny momba ny fiarahana amin’ny aterineto. Milaza izy ireo fa»tsy ny asa»,»tsy tena izy», ary»dia mila ianao mahita ny olona iray ao amin’ny tena fiainana.»Maro ireo maimaim-poana amin’ny aterineto mampiaraka toerana avy any izay trano ny an-jatony maro ny azo fidiana ny olona izay miandry fotsiny ho anao hifandray amin’ny azy ireo. Azonao atao ny mitady ny tanàna, ny karazana, ny taonany sy ny sisa. Bebe kokoa ny olona ankehitriny ny fihaonana an-tserasera, sy ny tonga lafatra lehilahy mety ho vitsivitsy fotsiny clicks izy. Mety tsy toy ny baolina kitra, fa misy ara-bakiteny an’arivony ry zalahy ao amin’ny soccer games vitsivitsy fotsiny ny an’ny vehivavy. Izany dia midika hoe ianao efa nahazo fa tsara vintana ny fivoriana tsara tarehy ny bandy. Mazava, ianao no mila mamaky ny momba ny lalao mialoha, ka dia afaka manomboka sy hanao resaka baolina kitra geek. Rehefa dinihina tokoa, tsy te-ho tratra fohy rehefa manontany ianao hoe iza ny ekipa, ary ianao namaly,»ny LA Lakers.»Izany fotsiny dia tsy manapaka izany, ry namana. Raha toa ka tsy raitra baolina kitra, nahoana no tsy miezaka rugby. Ny pubs dia ho feno, ary hisy ry zalahy na aiza na aiza. Ny Cricket no iray hafa tsara iray. Raha toa ka misy ny tambajotra hetsika tao amin’ny faritra an-toerana mifantoka manodidina ny zavatra iray liana ianao toy ny famokarana horonantsary, raharaham-barotra, ny fitantanam-bola, ny fanoratana sy ny sisa nahoana no tsy miseho eny ary mahita izay afaka hihaona. Tsy fantatrao, dia mety ho kitapo ny tenanao ny daty. Mazava ho azy, dia afaka, na mandeha alina sekoly na ny andron’ny sekoly, fa raha toa ka efa nahazo ny somebiseby erỳ an-trano sy ny asa-fiainana-dranomasina, dia alina ny oniversite mampiseho ny ace toerana hihaonana toy ny saina ry zalahy. Rehetra tokony atao dia ny haka ny lohahevitra iray liana ianao ao, mandoa ny sarany sy ianao izy. Ary na dia tsy hihaona vaovao ny olona, fara faharatsiny, mba hahazoana ny vaovao fahaiza-manao.
Raha fantatrao ny mahazatra fiara mampiseho akaiky anao, afaka no be dia be, ratsy kokoa noho ny popping miaraka mba jereo ny zavatra rehetra momba ny. Na dia fiara tsy marina ny zavatra tokony ho fantatrao fa misy ho be dia be ny lahy solika-loha tsy izay dia ho faty mba hihaona ny ankizivavy dia afaka volana ny kodia sy ny fahalalana. Antoka, dia mety hahazo roped ho nandre ny momba izany velon-tebiteby sy sarotra tsy toy ny»tsinontsinona-enim-polo»sy ny»novakiny soavaly fahefana», fa mety koa dia hihaona tena manonofinofy lehilahy izay aelin’ny Mercedes ary mitady vehivavy vaovao.
Satria sci-fi fivoriambe dia fomba LEHIBE mba hihaona iray ry zalahy na inona na inona ny zavatra mahaliana. Raha mbola tsy nandre ny Batman ary afaka manontany fanontaniana vitsivitsy momba ny tantara an-tsary, ry zalahy no maka ny miahy anao. Na dia tena tsy tokony hilaza ny fandraisana mpiasa avokoa ny mpitantana izay te-hanova ny asa satria»TE-HIHAONA VAOVAO ny OLONA,»miova asa dia azo antoka fa zavatra tokony handinika raha mankahala ny asa amin’izao fotoana izao sy izay rehetra ry zalahy ireo na mankaleo, hafahafa na manambady. Asa fiovana mety midika vaovao ianareo, ary izany dia manome anao fahafahana tsara kokoa ny tenanao, ary koa mba hihaona vaovao ny olona. Misy isan-karazany ny asa dia afaka manandrana, fa zava-dehibe fa handinika ihany koa ny zavatra izay mifanaraka amin’ny fahaiza-manao-napetraka. Karaoke alina amin’ny namanao no fomba lehibe mba hihaona ry zalahy. Sary fotsiny izany: efa nampiaiky volana azy ny Beyoncé hotahafina, ary ankehitriny dia te-hahita anao duet miaraka aminy eo Ny Aiza Isika Rehetra. Rehetra afa-po ny toerana ity dia tanteraka tsy manam-paharoa sy ny zon’ny mpamorona, raha te-hizara ny tapa-ny afa-po, avy eo dia mametraka mavitrika rohy miverina. Vaovao rehetra ao amin’ny tranonkala ity dia mitondra afa-tsy fahalalana sy ny tsy recommendatory toetra amam-panahy. Miangavy, mangataka ny toro-hevitra ny dokotera, fa tsy ny tena fitsaboana. Isika, dia foana ny miezaka mba hanome ny tsara indrindra sy tena marina ny vaovao azo atao eto, fa ianao no tompon’andraikitra amin’ny zavatra ataontsika. Isika dia tsy ho azo natao mendrika na inona na inona mitranga avy amin’ny fampiasana ny vaovao eto
← MAMPIARAKA TOERANA Fiarahana an-Tanàna. FIARAHANA ho maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana ho an'ny lehibe, ny fifandraisana, ny fanambadiana, ny famoronana ny fianakaviana
CHAT TSY MISY FISORATANA ANARANA MAIMAIM-POANA →